Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: sao dia malailay fonosona | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: sao dia malailay fonosona
Eo am-piandrasana ny vokatra na ny andaniny na ny ankilany. Tsy vitan’ny samy manantena handresy fa samy mino fa tsy mety ho hafa noho ny fanamafisana ny fandreseny ny fanambarana ny vokatry ny fifidianana. Miteraka ahiahy eo amin’ny fiarahamonina ny fanehoan’ny roa tonta amin’ny fomba mitovy finoana mifanipaka. Toy ny fifaninanana ny fisehon’ny fifidianana. Ny iray amin’ireo roa lahy nifaninana ihany no ho mpandresy. Tsy vitan’izany fa ny filazana mialoha ny vokatra dia sady fanivaivana ny mpifidy no tsy fanomezana hasina ny fifidianana. Inona moa no anaovana fifidianana raha fantatra mialoha ny valiny? Inona ny antony iarovana ny fahalalahan’ny tsirairay amin’ny fanomezana antoka ho an’ny fiafenan’ny safidiny, raha efa misy mahay misava mialoha ny hevitra miafina any anatin’ny fanahin’ny vahoaka manontolo?
Vita izay ny fifidianana. Tsy hampiova na inona na inona intsony ny rahom-bava. Eo andan’izany anefa arahaba soa arahaba tsara raha toa ny fandihizana tsy amin’aponga io dia fomba fampitandremana mikasika ny fanodinkodinana ny vokatra fa samy tsy hanaiky lembenana. Marina izany, nefa tsy hita ho atao afa-tsy anatra ho an’ny any aoriana. Ny fandinihana ny fitsipika sy lalàna mifehy ny fifidianana moa tsy afaka ho lazaina mahafa-po. Aiza ve na ny lisitry ny mpifidy aza dia mandresy lahatra amin’ny tsy maha tomombana azy. Eo amin’ny mpiray tanàna ohatra misy ny efa lasa razana no velomin’ny fahazoana karatra mpifidy nefa ny velona voafafa avy ao anaty listra. Matoa moa nilatsaka ho mpifaninana dia efa nanaiky an’izany fitsipika mivilambilana toy izany.
Tsy izay mandresy eo no andeha ho endrikendrehana ho tompon’andraikitra momba izany. Na koa ny fandreseny no tsy omena hasina arak’izany. Izay voafidy eo no Filoha na tsara na ratsy ny fanomanana sy ny fintantanana ny fanaovana ny fifidianana dia efa samy tokony nahafantatra teo am-pirotsahana. Toy ny fifaninanana hazakazaka fisedrana làlan-tsarotra na an-tongotra izany na am-bisikileta na familiana fiara, tsy efa eny am-pandehanana vao hitaraina momba ny fahalaman’ny làlana.
Na goragora toy inona anefa ny fitsipika mety ho nisy ihany ny fihoaram-pefy, afaka hametrahana fitarainana izany ary na inona na inona fahatokisana na tsia momban’ny vokatra valin’ny fitarainana dia izay no tontolo manodidina ny fifidianana ka tsy hita tsy ho ekena. Tsy rariny ? Angaha mbola miteny izany rariny izany, efa ela no nanadinoana fanomezana rariny ho an’ny rariny.